theZOMI: [MoemakaDaily] 19th April - MoeMaKa Daily
[MoemakaDaily] 19th April - MoeMaKa Daily
မေလ ၂၅ ရက်နေ့ နယူးယောက်မြို့တော်မှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ (ကို) ကိုကိုကြီး တို့နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ပြင်ဆင်ကြရန်
No comments: Labels: Ba Kyaw,Poems
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ (ဦးဇ၀နမှတဆင့်)၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၃
ရွှေတွံတေးဆရာတော်နှင့်မဟာချိုင်မိသားစုတို့ ကြီးမှုးကျင်းပသော မဟာချိုင် မဟာသင်္ကြန် ၁၂ ကြိမ်းမြောက်ဝိပသ၁နာတရားစခန်းပွဲကို ၂၀၁၃ ဧပြီလ ၁၃ ရက်မှ ၂၁ ရက်နေ့ ထိကျင်းပပြုလုပ်ရာ နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသား ၂၅၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဒုလ္လဘ ၁၃၆ ပါး သီလရှင် ၄၀ ပါးနှင့် ယောဂီ ၅၀၀ ကျော် စုပေါင်းသာသနာပြုကုသိုလ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်တွင် ရွှေတွံတေးဆရာတော်သာသနာပြုရင်း ရှင်ပြု ရဟန်းခံ ဒုလ္လဘ ၁၀၀၀ ကျော် သီလရှင် ၄၀၀ ကျော်သာသနာ့အမွေခံခဲ့ကြပြီး ယောဂီ ၅၀၀၀ ကျော် ၀ိပဿနာအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ရွှေတွံတေးဆရာတော်က ...... " သူများနိုင်ငံမှာခက်ခက်ခဲခဲ သာသနာပြုတာတောင်ဒီလောက်သဒ္ဓါတရားအားကောင်းကြတာဆိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်း စစ်စစ်မှန်မှန် သာသနာကိုထောက်ပံ့ကြတဲ့အကြီးအကဲနဲ့ ပြည်သူတွေသာရှိကြရင် အရမ်းကျေနပ် စရာကောင်းအောင် သာသနာထွန်းကားမှာပဲလို့ ...."မိန့် ကြားခဲ့သည်။
ထိုင်း - မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ၁၄. ၄. ၂၀၁၃ နေ့ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့ က ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်ရှိယာယီပတ်စပို့ ရုံးတွင်ကျင်းပရာ ၂ နိုင်ငံထာဝန်ရှိသူများ အလုပ်သမားရေးအရာရှိများ ရဲမင်းကြီးများနှင့်နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားများ စုံညီတက်ရောက်ကြပြီး ရွှေတွံတေးဆရာတော်လည်းကြွရောက်ခဲ့သည်။
ထိုင်း - မြန်မာ ဆရာတော်များက သီ ပရိတ်ရွတ် ရေစက်ချ အမျှဝေခြင်းကို ၂ ဘာသာဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
ထို့ နောက်ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းကြပြီး သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ - မြန်မာ့ရိုးရာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြိုင်ပွဲနှင့်မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ယိမ်း အကများဖြင့် တနေ့ တာပျော်ရွှင်စွာကျာင်းပဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။
ရွှေတွံတေးဆရာတော်က .... " ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအတွက် လိုအပ်တာရှိရင်ပြောပါ ဘုန်းကြီးက လိုအပ်တာတွေ့ရင်လည်းပြောပါမယ် အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြပါ ..." စသဖြင့်အရာရှိများကိုမိန့် ကြားခဲ့သည်။
ရိုးရာသင်္ကြန် နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ က မဟာချိုင် မိသားစုများနှစ်ဆန်း ပရိတ်ပွဲကို နေရာ အနှံ့ ကျင်းပကြရာရွှေတွံတေးဆရာတော် နှင့်ရဟန်းတော်များကြွရောက်ခဲ့ကြသည်။
အနရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ် သရဇျယ်ပေးကြပြီးကုသိုလ်ပြုကြသည်။
ရွှေတွံတေးဆရာတော်က...." ကိုယ့်နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေ ရေခြားမြေခြား နိုင်ငံခြားမှာ အနယ်ရာယ်ကင်းဘေးရှင်းကြပါစေ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ဒေသကိုလည်း အနယ်ရာယ်ကင်းကင်း ဘေးကင်းကင်းနဲ့ အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ ​ဆုတောင်ပေးခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုကျိုတက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း ရုပ်သံ
ကိုထွန်းဝေ (ဂျပန်) ရိုက်ကူးတင်ဆက်သည်။ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃